चोट मुक्त भएर खेल मैदानमा फर्किएपछि भान डाइकको अनुभव!
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स संबाददाता December 1, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| भर्जिल भ्यान डाइकले आफ्नो खराब एसीएल लिगमेंटको चोट पछि पूर्ण फिटनेसमा फर्कने प्रयास गर्दा आलोचकहरूको सास्ती भोग्नु परेको बताएका छन्।
अक्टोबर २०२० मा एभर्टनमा उनले आफ्नो लिगमेंट गुमाएका थिए र नर्विच विरुद्धको यस वर्षको ओपनरमा अन्तत: पुनरागमन गरेका थिए।
त्यस्पस्चात अहिलेसम्म प्रिमियर लिगको हरेक मिनेट खेलेका छन् र सफलता र गल्तीहरू दुवैको साथ आउने उच्च र तल्लो मनोबल अनुभव गरेका छन्।
“लय महत्त्वपूर्ण छ र मानसिक रूपमा पनि यो ठूलो कुरा हो,” बुधबार गुडिसन पार्कमा फर्कनु अघि भ्यान डाइकले भने।
मैले याद गरेको छु – यदि मैले चीजहरू राम्रोसँग गरें भने, सबैले भन्छन् कि उसको चोटको असर छ जस्तो लाग्दैन।
तर जब म एक वा दुई गल्ती गर्छु र गल्ती हुन्छ – तब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरु उ चोटबाट फर्केको छ वा उसले अब गर्न सक्दैन भनेर भन्न थाल्छन।
यस्ता कुराहरू मानसिक रूपमा ठूलो कुरा हुन्। सौभाग्यवस म मानसिक रूपमा बलियो छु र म ती सबैमा कुनै ध्यान दिइरहेको छैन।
“सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईलाई थाहा छ जब तपाईले राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ र म्यानेजर र मेरो टोलीका साथीहरूको सहयोगमा मलाई लाग्छ कि म प्रत्येक खेलमा प्रगति गरिरहेको छु।”
लिभरपुल खेलमा प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको चेल्सीभन्दा दुई अंकले पछि छ भने म्यानचेस्टर सिटी जुर्गेन क्लोपको टोलीभन्दा एक अंकले अघि छ।
“मेरो विचारमा लिग जित्न पक्कै पनि गाह्रो हुनेछ,” उनले भने। “यदि तपाइँ शीर्ष चार मुनिका टोलीहरूलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने, यदि तपाइँ पूर्ण रूपमा ध्यान केन्द्रित हुनुहुन्न, तपाई १००% दिनुहुन्न वा उनीहरूसँग थोरै लक छ भने सबैले सबैको बिरूद्ध जित्न सक्छन्। तर त्यो प्रिमियर लिग हो।
“यो सिजन धेरै लामो छ, जे पनि हुन सक्छ, तर यदि तपाइँ टोलीहरू र खेलाडीहरूको गुणस्तर हेर्नुहुन्छ भने यो ती वर्षहरू मध्ये एक हुन सक्छ जब सबैले कुनै न कुनै बिन्दुमा एक अर्का विरुद्ध जित्छन्।
“फुटबलमा सबैभन्दा गाह्रो कुरा भनेको सिजनभर निरन्तरता दिनु हो र जुन सिजन हामीले जित्यौं हामी निश्चित रूपमा एकरूप थियौं।”
“हामीसँग धेरै खेलहरू बाँकी छन् र त्यहाँ धेरै ट्विस्ट र टर्नहरू हुन सक्छन्। हामी चोट विरुद्ध भने भाग्यशाली हुनुपर्दछ, गत वर्ष के भयो देख्यौं तर मेरो विचारमा हामीसँग उत्कृष्ट टोली छ। यो सबै निरन्तरता र आत्मविश्वासको बारेमा हो।”
“हामीले केवल आफैमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र हामी गर्नेछौं। हामी पूर्ण छैनौं – त्यो स्पष्ट छ – तर हामी सुधार गर्नेछौं।”
Posted in अन्तरष्ट्रिय फुटबल, फुटबलTagged #hamro nepal sports #liverpool #premier league #Van Dijk
प्रिमियर लिगमा आज शिर्ष स्थानको रोमान्चक लडाई!
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| इङ्लिस प्रिमियर लिगमा मिड वीक खेल अन्तर्गत आज तालिकाको शीर्ष ३ टोलीले आ-आफ्ना खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। लिभरपुल, म्यान्चेस्टर सिटी र चेल्सीको आपसमा दुई अंकको मत्रै फरकमा माथि तल रहेको हुँदा अबका खेलहरु फाइनल सरह हुने देखिन्छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक देखिन थालेको प्रिमियर लिगमा कुनै एक टोलीले आज […]
बेन्जेमाको कथा, रोनाल्डोको छायाँ देखी मड्रिडको राजा सम्म
टोटेन्हम विरुद्ध रोनाल्डोले बनाएका केहि किर्तिमानहरु
टेन ह्याग प्रशिक्षक छानिए रोनाल्डो, मग्वायर र पोग्बा हटाउन सुझाब
युइएफएद्वारा इंग्ल्याण्ड तिन घटनाक्रमका लागि दण्डित हुनसक्ने, सुरु भयो अनुसन्धान !!
रियल मड्रिडले भोग्यो सिजनको पहिलो हार, पहिलो स्थान यथावत !